‘नेपाली संगीत लावारिस छ’
पुष्पा थपलिया शनिबार, माघ ३, २०७७, ०६:३५
शुक्रबार अपराह्न १२ बजेतिर संगित रोयल्टी संकलन समाजको कार्यलय, अनामनगर पुग्दा अध्यक्ष महेश खड्का हार्मोनियममा व्यस्त थिए। हातमा कलम र कापी बोकेर नयाँ गीतमा संगित भरिरहेका उनले संगीत सिर्जनाका विषयमा आफ्नो तरिका बताए। ‘बल गरेर त्यो मन यता मोड भन्दिन म’ भन्ने गीतको संगीत मैले शब्द हेरेर बनाएको हुँ अनि ‘मैले त्यही भएर मनपराको’ भन्ने गीत चाहिँ पहिले धुन तयार पारेर कृष्णहरी बरालले त्यसमाथी शब्द लेखेका हुन्।
न बिर्से तिमीलाई न पाएँ तिमीलाई, मेरो दिल छ पोखरामा जस्ता चर्चित गीतमा संगित भरिसकेका खड्का अहिले खोसाखोस परिरहेको ‘याद गर्न पनि कोहि न कोहि त चाहिँदो रहेछ’ गीतको संगितकार पनि हुन्।
नजिकबाट संगित क्षेत्रलाई नियालीरहेका खड्काले हाल गायक प्रमोद खरेल र उत्पादक सविन रेग्मीबीच मच्चिरहेको हल्लाखल्लालाई बुझाउँदै भने, ‘बच्चा जन्मियो। जन्माउनेले कसैको जिम्मा लगाएर छोडिदियो। जिम्मा पाउनले त्यसको पालनपोषण गर्‍यो र हुर्कायो। हुर्किएपछि त्यसले टन्नै पैसा कमाउन थाल्यो‚’ उनले अगाडि थपे, ‘वर्षौंपछि जन्माउनेले त्यो मैले जन्माएको बच्चा हो, कमाइमा अधिकार मेरो लाग्छ भन्यो। पाल्नेले पनि मैले दुःख गरेर पालें, हक मेरो लाग्छ भन्यो। यो मुद्दा अहिले अदालतमा पुगेको छ। फैसला के हुन्छ थाहा छैन।’
अदालतको फैसलाबारे बिरसिलो पारामा खड्काले भने, ‘हाम्रा सरकारमा बसेका मानिससँग संगीतको राम्रो ज्ञान छैन। मुलुकी ऐन पढेकाले प्रतिलिपी ऐनका बारेमा गरेको फैसलाले कस्तो नजीर बस्ने हो भन्ने चिन्ता लागेको छ। फैसला भन्नेबित्तिकै कसैको हार र कसैको जित हुन्छ‚’ खड्काले भने, ‘यहाँ जसले जितेपनि हार संगीतको हुन्छ।’
त्यसो भए उपाय के छ त?
स्रष्टा सर्जकको सचेतना नै यसको उपाय भएको खड्काले बताए। उनले उदाहरण दिदै भने, ‘हामी आफ्ना गीतसंगीत लिन्न भन्दाभन्दै पनि निःशुल्क बाँड्छौं, यसले गर्दा करोडौंको घाटा खेपिरहेका छौं।’ सुरुमा नचल्ला भनेर वास्ता नगरेका गीत नै चर्चामा पुगेपछि समस्यामा जकडिएको उनको भनाइ छ।
चलेका गीतका गायकगायिकालाई त खड्का संगितका नातेदार भन्छन्। दाजुभाइ मिलेर सबै काम गर्‍यो, सम्पती जोड्यो। अंशको भागबण्डा लगाउँदा भान्जाभान्जी पनि थपिन्छन् र बराबरको भाग हत्याउँछन्।
संगितको क्षेत्रमा सबैभन्दा फाइदा खाने पनि गायकगायिका नै भएको उनको भनाइ छ। स्टेज उनिहरुकै, गीतको रोयल्टीमा बराबरको भाग उनिहरुकै।
भडास पोख्दै खड्काले भने, ‘अर्काले मेहनत गरेर गीत तयार पार्‍यो तर गाएपछि चर्चा उसैको मात्र। निर्माणका क्रममा संगितकार, गीतकार, वाद्यवादकलगायतको मेहनत सबै शून्यमा विलीन भयो‚’ उनले थपे, ‘अझै मेरो गीतको ट्रयाक भन्दै स्टेजमा बजाउन दिँदा कन्परो तात्ने रहेछ।’
कन्सर्टहरुमा जाँदा ट्रयाकको साटो वाद्यवादक लैजाने, आएको पैसाको केही रकम संगितकार र गीतकारलाई दिने गरेमा यस्ता समस्या हट्ने उनको भनाइ छ।
अहिले आएका नयाँ संञ्चारमाध्यमसँग पनि आक्रोसित छन् खड्का। उनले भने, ‘समय, ट्याक्सी भाडा अझै चिया कफीको दामसमेत तिरेर उनिहरुलाई अन्तवार्ता दिन जान्छौं। त्यसलाई अनेक हेडलाइन राखेर बेच्छन् र डलर कमाउँछन्। त्यहाँ परिश्रमक मोल खै? हाम्रो रोयल्टी खै?’
जबसम्म यस्ता कुरामा कलाकार स्वयं सचेत हुँदैनन्, संगीतमा यस्ता झमेला भइरहने उनको भनाइ छ।
आफूलाई संगित क्षेत्रमा योगदान दिने रहरले रोयल्टी समाजको अध्यक्ष बनेको बताउने खड्का अब भने संगीत सिर्जनामै समय बिताउने सुरमा छन्। निधार खुम्च्याउँदै उनले भने, ‘जति गर्दापनि यो क्षेत्रका मान्छेले कुरा बुझेनन्, अब आफ्नै काममा ध्यान दिन्छु।’
एक महिनामात्रै कार्यकालको अवधि रहेको बताउँदै उनले भने, ‘मैले मेरो युवा अवस्थाको सक्रिय दिमागलाई यता ल्याएर खेर फालें कि जस्तो लाग्छ।’
उनलाई रोयल्टी समाजप्रति यस्तो निराशा पैदा हुनुको कारण हो, भ्रष्टाचारको आरोप। करोडौंको भ्रष्टाचार गरेको आरोपबारे उनले भने, ‘पहिले विदेशीको चन्दाले समाज चलेको थियो। अहिले त्यो बन्द छ। संस्था चलाउन कर्मचारी चाहिन्छ, कार्यलय चाहिन्छ। यहाँ पैसा खर्च हुन्छ।’
यातायातबाट लाखौं रोयल्टी उठेको तर वितरण नगरिएको सम्बन्धमा उनले भने, ‘रोयल्टी दुई प्रकारले उठाइन्छ। एउटा कुन गीत कतिचोटी बजाइयो भन्ने आधारमा, अर्को समग्र गीत बजाइएको आधारमा।’
कुन कलाकारको गीत कतिचोटी बज्यो भन्ने कुरा रेडियो, टेलिभिजन तथा अहिलेका डिजिटल प्लेटफर्मबाट सजिलै थाहा हुन्छ। तर यातायातको साधनमा कुन कलाकारको कस्तो गीत कतिचोटी बज्यो भन्ने थाहा हुँदैन। त्यहाँ जुनसुकै गीत बजाएबापतको रोयल्टी संकलन गर्ने हो।’
यातायातका साधनबाट लाखौं रोयल्टी उठेको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘हामीले त्यही गीत बजाएबापत उठेको पैसाले कर्मचारीको तलव, कार्यालयको भाडादेखि अन्य खर्च जुटाउँछौं।’
बाहिरका मान्छेले आएको देख्ने तर गएको नदेख्ने भएकाले यता आरोप लागेको उनले बताए।
त्यसो त डिजिटल प्लेटफर्म सुरु भएसँगै पाइरेसीको मात्रा पनि बढेको उनको भनाइ छ। हामीले हाम्रा सन्तान जन्मायौंमात्रै त्यसलाई कस्तो वातावरणमा कसरी हुर्काउने भन्ने जानेनौं। चिन्तित मुद्रामा उनले भने, ‘हाम्रा संगीतहरू अभिभावकविहीन बनेका छन्। तिनिहरू लावारिस छन्।’
म भाइरल हुन आएको गायक हैन: बसन्त अर्याल बसन्तले सात कक्षा पढ्दा नै गीत निकाले। त्यो समयमा अहिलेजस्तो युट्युब थिएन न त सिडीकै जमाना आइसकेको थियो। उनले एल्वममा राष्ट्रिय गीत... शनिबार, फागुन २२, २०७७
अर्को मुखर्जी र लोकगीत कालो लामो जगल्टा, आफूलाई फिट नभएर खुकुलो भएका लुगा, लामा दाह्री र हातमा चुरोट। संगीतको क्षेत्रमा यो हुलिया दिमागमा आउने वित्तिकै मान... शनिबार, फागुन २२, २०७७